Toeram-pandehan'ny hafanana hafahafa China Manufacturer
Description:Reptile Heater Mat,Under Heated Pad,Pet Heating Pad
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Toeram-pandehan&#39;ny hafanana hafahafa
Toeram-pandehan'ny hafanana hafahafa
Model No.: XHC-F035D
Fonosana: Color package
taratasy fanamarinana: UL
Ny fitaovana fanamafisam-peo vaovao dia iray amin'ireo fitaovana tena mahomby sy azo antoka ho an'ny fahasalamana ho an'ny reptil sy ny amphibie. Ny raibeny sy ny amphibians dia mangatsiaka ary ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary matetika no ampiasain'ny masoandro amin'ny hafanana. Ny Reptilia dia fitaovana fampiasan'ny terrarium izay mampivelatra ireo habaka manjelatra ny masoandro. Izy ireo dia tsara kokoa ny loharanom-pahasalamana 24 ora ho an'ny karazana biby an-tapitrisany sy amphibiana ary ilaina indrindra ho loharano hafanana mandritra ny alina ho an'ny karazam-borona maro. Ny toeram-piantsonan'ny Faritra Infrared Farany dia mety hifikitra hatrany amin'ny terrarium, mamorona fatorana matanjaka ho an'ny famindrana hafanana tsara.Durable.flexible.waterproof. Ny fananganana anti-kovety sy ny fanamafisana ny fiarovana dia mitarika ho amin'ny fiainana serivisy lava. Tena azo antoka tanteraka. Ny serivisy OEM dia misy. Ny vokatra antsika dia natao ihany koa mba hifanaraka amin'ny fenitra CE, RoHS, Ul, ETL.
1. Karazan-koditra vita amin'ny karbôbôksa, ary ny hafanam-pandrefesana farafahakeliny dia mafana.
2. Ideal ny biby mandady, ny biby miain-kena, ny biby mandady, ny trondro, ny vorona, ny saka, ny alika, ny bitro.
3. 3. Miaraka amin'ny teknôlôjika mahaleotena mahaleotena (PTC) dia mamolavola ny tenany izany, mahasalama sy matanjaka kokoa.
4. Amin'ny PVC, dia tsy misy rano
5. 42 ℃ ny haavony, hahatonga ny biby fiompy hahatsiaro ho mafana sy siramamy
6. Ny serivisy OEM azo alaina, ny endriny manokana dia raisina.
7. Miendrika karazana soka-bolo isan-karazany, boaty glasy, reptitles ary biby fiompy izay miadana.
8. Fanamafisana ny fiarovana tsy misy olana
Fikarakarana fiompiana biby fiompy
fikarakarana fanafody reptile
Ny fantson-drano ambanin'ny tany dia manala ny fandriam-bolo matevina amin'ny ala any anaty ala. Ny habetsaky ny ora isan'andro sy ny tanjaky ny masoandro ao amin'ireny faritra ireny dia mety hahatonga ny randran-tsakafony mafy. Ny maintany dia maina ary tsy mampitombo ny fantsonan'ny rivotra hita any amin'ny ala mando na tropikaly. Ny herin'ny fitaovana fantson-drano ao amin'ny Wonder Wave dia natao mba hiantohana tsara ireo fepetra ireo ao amin'ny terrarium.
habaka: 200 * 300mm, voatokana azo
Fiotazana: 16w, azo ampiasaina
Mitady fitaovana sy mpanafatra "Reptile Warming Care" ve ianao? Manana safidy lehibe isika amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hamorona. Ny Reptile Heat Mat dia mari-boninahitra azo antoka. Izahay dia orinasa orinasa Shinoa Mat. Raha manana fanontaniana ianao, dia tsidiho azafady mba hifandraisana aminay.
PVC Fanasan-damba miaraka amin'ny fandriana maranitra Contact Now
Teo ambany tafo manify amin'ny vokatra reptile Contact Now
Reptile Heat Pad eo ambanin'ny tanky ho an'ny biby kely Contact Now
Nalaina tao ambanin'ny Tank Heater Reptiles Heat Pad UL Contact Now
Reptile Heating Pad PetcoHeat Mat sy thermostat Contact Now
Ny UL dia misy lisitra fanairana fantson-drano ho an'ny mpanadio akoholahy Contact Now
Reptile Aquarium Heat Pad Directory Contact Now
Best Reptile Heating Pad Reptile 10 gallon heater Contact Now
Reptile Heater Mat Under Heated Pad Pet Heating Pad Reptile Heater Mats Reptile Heated Mat Reptile Heater Pad Reptile Heating Mat Reptile Heated Pet Mat